बाबुराम क्षेत्रीय र जातीय समूहलाई भित्र्याउन सक्रिय « Pahilo News
बाबुराम क्षेत्रीय र जातीय समूहलाई भित्र्याउन सक्रिय
प्रकाशित मिति : 12 April, 2017 12:23 pm
३० चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट अलग भएपछि पूर्वप्रशासक, कलाकारहरु, माओवादी, एमालेलगायत अरु दलमा असन्तुष्ट रहेकाहरुलाई बटुलेर डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति गठन गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय नयाँ शक्ति विघटनको दिशातिर जान थालेपछि विघटन हुन नदिन डा. भट्टराईले विभिन्न क्षेत्रीय र जातीय संगठनसँग एकता गर्न थालेका छन् ।
केही समययता विभिन्न मुद्दाहरुमा सहकार्य गर्दै आएका नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन सार्नुपर्ने माग राखेर फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्यलाई अघि बढाएका डा. भट्टराई त्यसयता नेता–कार्यकर्ताको पंक्तिमा गएको पहिरोलाई रोक्न असमर्थ हुँदै गएका छन् ।
सहसंयोजक महेश कोर्मोचा, माथिल्लो तहका नेताहरु मुमाराम खनाल, रामेश्वर खनालका साथै सो पार्टीमा सम्भावना बोकेका उमेश बस्नेत, देव लिम्बु, निर्मल भट्टराईसहित ठूलो पंक्तिले नयाँ शक्ति छाडेपछि डा. भट्टराई रन्थनिन पुगेका थिए । सो पार्टी परित्याग गर्नेहरुले डा. भट्टराईमा प्रजातान्त्रिक चरित्र नरहेको र वैचारिक स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोज्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।
आशलाग्दा नेता–कार्यकर्ताहरुले धमाधम पार्टी छाड्दै गएपछि अब डा. भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै फोरमसँग एकीकरण गर्ने तयारी थालेका छन् । फोरमसँगै उपेन्द्र यादवसँग राजनीतिक रुपमा नजिक रहेका मधेसका अरु सानातिना दलसँग पनि नयाँ शक्तिले एकीकरण गर्ने सुरसार गरेको छ ।
मधेसी दलहरुसँग मात्र होइन, जातीय संगठनका रुपमा चिनिने लिम्वुवान मुक्ति मोर्चा, खम्वुवानजस्ता समूहसँग पनि नयाँ शक्तिले वार्ता अगाडि बढाइरहेको छ । ती दलहरुसँग पनि एकीकरण गर्ने तयारीमा नयाँ शक्ति जुटेको बताइएको छ ।
पूर्वप्रशासक, कर्मचारी, कलाकार र अरु दलमा असन्तुष्ट रहेकाहरुलाई समेटेर पार्टी गठन गरे पनि जनपंक्तिमा त्यसको प्रभाव पर्न नसकेपछि डा. भट्टराईले क्षेत्रीय र जातीय संगठनहरुलाई बटुलेर पार्टी बनाउन चाहेको बताइन्छ ।